इटहरी उप महानगर प्रमुखले गरेको प्रतिवद्धतामा उप प्रमुखले हस्ताक्क्षर नगर्नुको कारण यस्तो रहेछ । – विराट अनलाइन खवर
भिडियो हेर्नुहोस् । तपाईं कसरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ इटहरी उप महानगर प्रमुखले गरेको प्रतिवद्धतामा उप प्रमुखले हस्ताक्क्षर नगर्नुको कारण यस्तो रहेछ । मतान्तर सुन्दरहरैचामा कस्ले बाजी मार्लान ? कति मतको अन्तर छ ? कुन वडामा कस्को विजय यो सबै हेर्नुहोस । Hello
इटहरी उप महानगर प्रमुखले गरेको प्रतिवद्धतामा उप प्रमुखले हस्ताक्क्षर नगर्नुको कारण यस्तो रहेछ ।
इटहरी उपमहानगरपालिका नवनिर्वाचित प्रमुख हेमकर्ण पौडेल ले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा इटहरीबासीका लागि गरिएको पाँच बुँदे निर्णय प्रतिवद्द्ता नवनिर्वाचित उपमेयर संगीताकुमारी चौधरीले हस्ताक्षर गर्न नमानेकी हुन् ।
नवनिर्वाचित मेयर पौडेलले सोमबार आफ्नु कर्यभार समाल्नुअघि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई सपथ ग्रहण गराएका थिए । आइतबारबाटै छलफल गरी निर्णय भएअनुसार इटहरीबासीको हितका लागि पाँच बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । जसमा गरिब, दलित, अल्पसंख्यक, विपन्न, असक्त, अपाङ, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य विमा गर्ने, इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रका महिलाहरुलाई नवजात शिशु पोषण अन्तर्गत दुई हजार एक सय उपलब्ध गराउने,सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत उपचार गर्न बाहिर जादा लिनुपर्ने रिफर लेटर सम्बन्धित वडाको स्वास्थ्य संस्थाबाटै लिन व्यवस्था मिलाइने निर्णय लिएका थिए । सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि अग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउने र नगर कार्यपालिकाको नगरसभा र नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चार माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णय पनि समाबेस गरिएको थियो ।
सार्वजनिक गरेर सुनाइएका निर्णयमा मेयर पौडेलले सदर गरेपनि उपमेयर संगीता चौधरीले हस्ताक्षर नगरेपछि फायल त्यसै राखिएको छ ।
पदभार ग्रहण गरेको दिन जनप्रतिनिधिले कस्तो निर्णय गर्छन भनेर जनताले गर्ने अपेक्षालाई उपमेयरले हस्ताक्षर नगरेपछि उपेक्षा गरिएको टिप्पणी गर्न थालिएको छ । आइतबारको छलफलको आधारमा तयार गरेका पाँच बुँदे निर्णयमा मेयरले मात्रै सदर गरेको इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राम चरित्र मेहताले बताए । ‘भिडभाड पनि भएकाले उपमेयरले एकछिनमा गर्छु भन्नुभयो पछि हस्ताक्षर भएन पदभार ग्रहण गरेको दिन जनताले पनि मनिटरिङ्ग गर्ने भएकाले नवनिर्वाचितले जनप्रिय निर्णय गर्ने चलन छ तथापी आज सदर गरिएको निर्णय सर्वसम्मतीका लागि कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्नुपर्छ ।‘नगरप्रमुखले राम्रा र जनप्रिय निर्णय गर्नुभएको थियो। ’ अधिकृत मेहताले भन्नुभयो ।
इहटरी उपमहानगरपालिकाकी निर्वतमान उपमेयर लक्ष्मि गौतमले नवनिर्वाचित उपमयेरसंग छलफलनै नगरि मेयरले एकलौटी तरिकाले ल्याएकाले हस्ताक्षर नगरेको बुझेको बताइन् । उनले त्यसखाले निर्णयमा मेयरले सदर गरेपछि उपमेयरले नगर्दा हुने बताइन् । उनले आज पदभारग्रहणमा आफुलाई बोलाएर मेयरले आफ्ना कुरा राख्न नदिएको आरोप पनि लगाइन् ।
उनले मेयरले निर्णय गरेका पाँच बुँदे निर्णय ५ बर्षे कार्यकालमा पुरा गर्न नै नसक्ने दावी गरिन् ।
नगर प्रमुखमा निर्वाचित पौडेल गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेद्वार बनेका थिए भने उनले ५ हजार भन्दा बढि मतले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार याम कुमार सुव्वालाई पराजित गरेका थिए भने उपमेयर निर्वाचित संगीता कुमारी चौधरीले गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका केशव कुमार विष्टलाई १३ हजार भन्दा बढि मतान्तरले हराउँदै विजयी बनेकी हुन् । यसो हो भने राम्रा र लोकप्रिय निर्णय पनि मान्न उप मेयरले अन्कन गरेको जन्कारहरु बताऊछ्न । फोटो फेसबुक वालबाट​
Tags: इटहरी उप महानगर प्रमुखले गरेको प्रतिवद्धतामा उप प्रमुखले हस्ताक्क्षर नगर्नुको कारण यस्तो रहेछ ।
Previous स्वास्थ्य प्रोटोकल मिचेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग
भिडियो हेर्नुहोस् । तपाईं कसरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ
सुन्दरहरैचामा कस्ले बाजी मार्लान ? कति मतको अन्तर छ ? कुन वडामा कस्को विजय यो सबै हेर्नुहोस ।